OZ House | Promotion Items
397 items found in “ Promotion ”
Swisse Prostate ဆီးကျိတ်ဆေးပြား
ဆီးကျိတ်ကို ဘက်စုံကောင်းမွန်စေ၍ အမျိုးသားများ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
အစိုဓာတ်ထိန်းပေးပြီး ဆံသားနှင့်အသားရေကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
Swisse Memory + Focus မှတ်ဉာဏ်နှင့် အာရုံစူးစိုက်မှု အားဆေး
မှတ်ဉာဏ် ကောင်းစေပြီး Alzheimer’s ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို လျော့နည်းစေသည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
Swisse Men's Ultivite အမျိုးသားသုံး စုပေါင်း ဗီတာမင် အားဆေး
Swisse Women's Ultivite အမျိုးသမီးသုံး စုပေါင်း ဗီတာမင်အားဆေး
Swisse High Strength Cranberry capsule (30 Tab & 90 Tab)
အမျိုးသမီး၏ သားအိမ်ကို ကာကွယ်ပေးသဖြင့် အမျိုးသမီးများ ပေါ့ပါး လှပစွာ နေထိုင်နိုင်သည်။
34000 Ks ~ 62000 Ks
30600 Ks ~ 55800 Ks
Swisse Lecithin(150 Cap & 300 Cap)
40000 Ks ~ 65500 Ks
36000 Ks ~ 58950 Ks
Swisse Iron ဓာတ်အားဆေး
သွေးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေပြီး ပင်ပန်းမှုကိုသက်သာစေခြင်း၊ စွမ်းအင်ဖြည့်စွက်ပေးခြင်း၊ အိပ်ရေးကောင်းမွန်စေခြင်းနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုမြင့်တင်ပေးခြင်းစသည်တို့ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။
Blackmores Joint Formula Advanced အဆစ်ဆေးပြား
အဆစ်နာခြင်းကို သက်သာစေပြီး အရိုးနု ပွတ်တိုက်ပွန်းပဲ့ခြင်းကို လျော့နည်းစေသည်။
Blackmores Pregnancy & Breast-Feeding Gold အားဆေး
Swisse High Strength Vitamin C Effervecent ဗီတာမင် C ရေဆူဆေးပြားဆေးပြား
Sold Out (Pre-Order)
Blackmores Celery 3000 ဆလရီရွက် အနှစ်သာရဆေး
gout /အဆစ်/အကြော အဆစ်ရောင်နာ
30000 Ks ~ 88000 Ks
27000 Ks ~ 79200 Ks
Bellamy's Milk (1)
ခံတွင်းလန်းဆန်းမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး သွားနာခြင်း၊ သွားဖုံးသွေးထွက်မှုနှင့် သွားဖုံးရောင်ရမ်းမှုတို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
Prospan Cough Relief for Children and Adult တိုက်ကပ်နွယ်ပင် ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး
ချွဲသလိပ်တွေကပ်ပြီးဆိုးတဲ့ချောင်း မှန်သမျှကို အမြစ်ပျက်ရှင်းထုတ်ပေးမဲ့ Prospan Chesty Cough Relief
34000 Ks ~ 38200 Ks
30600 Ks ~ 34380 Ks
ဗီတာမင်D နှင့် calcium သည် အရိုး၊ သွား နှင့် ကြွက်သားများ ကျန်းမာသန်စွမ်းစွာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးရန် အတွက်ပံ့ပိုးကူညီပေးသည်။
ကိုယ်ခံအားကောင်းပြီး အရိုးနဲ့သွားများ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေသည့် Ostelin Vitamin D Liquid Kids
အေးမိနှာစေးဖျားနာတာတွေမဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးတဲ့ Nature's Way Cold & Flu gummies
Calcium + vitamin D က ကလေးများရဲ့ အရိုး၊ သွားများကို ကျန်း မာစွာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် အထူးကူညီပေးပါသည်။
Nature’s Way Vita Gummies Vitamin C + Zinc(60 pas & 120pas)
Vitamin C +Zinc ပြည့်ဝစွာပါဝင်ပြီး ခုခံအားကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်းကြောင့် အအေးမိ လွယ်ကူသော ကလေးငယ်များအတွက် အထူးသင့်တော်သည်။
22000 Ks ~ 50000 Ks
19800 Ks ~ 45000 Ks
အစားစားပြီး စားသလောက်ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားဖို့ - Nature’s Way Multi-Vitamin Fussy Eater ( 50 Gummies )
ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်မြင့်မာစေပြီး ခန္တာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ vitamin တွေဖြည့်စွက်ပေးမဲ့ Nature’s Way Omega-3 + Multi Vitamin ( 50 Pastilles )
Caprilac Full Cream Goat Milk ဆိတ်နို့မှုန့်
သဘာ၀ ဆိတ်နှို့မှုန့် အစာအိမ် ရှိသူများနှင့် သင့်တော်သည်။
အသားရေ ပျက်စီးခြင်းကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးပြီး အစိုဓါတ်ဖြည့်ဆည်းပေးကာ အသားရေ ကြည်လင်အေးမြ၍ နူးညံ့စေသည်။
Nutrition Care Gut Relief အစာအိမ် အားဆေးမှုန့်
ဆေးဖက်ဝင် အပင်နှင့် အာဟာရ ဓါတ်များစွာ ပါဝင်သဖြင့် အစာပုံမှန်မစားခြင်း ပုံမှန်ထက ်လွန်ကဲစွာစားခြင်း တို့ကိုအချိုးကျ ထိန်းညှိပေးကာ အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်း ထိခိုက်မှုကို သက်သာစေသည်။
Nulax Natural Laxative အူလမ်းကြောင်း သန့်စင် သဘာ၀ ဆေးပြား nu-lax
ဝမ်းချုပ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးကာ အူလမ်းကြောင်းရှိ ကောင်းကျိုးပြု ဘတ်တီးရီးယား ပိုးများကို တိုးပွားစေပြီး အစာကြေစနစ် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်စေသည် ။
Vitamin D3 ဟာအရိုး၊ကြွက်သား၊သွားများကိုလည်းခိုင်မာစေ
Panadol 5-12 years(Orange & Strawberry)200ml
Blackmores Fish Oil 400 Cap
Blackmores Fish Oil 200 Cap
Swisse Teenage Women’s Ultivite Multivitamin
ဦးနှောက်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးမူကိုတိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့ချပေးခြင်း၊ ခုခံအားကောင်းခြင်း နှင့် အသားအရေကိုလည်း ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။
Abbott Ensure - Vanilla
ဉာဏ်ရည်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအားကျဆင်းသူများ၊ အာဟာရချို့တဲ့သူများအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
Dermatix Silicone Gel for Scar Reduction (အမာရွတ်ပျောက်ဆေး)
အမာရွတ်တွေ သိသိသာသာ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်
မျက်ကွင်းညိုသူများ, မျက်အိတ်ဖောင်းသူများ, မျက်လုံးတဝိုက်အရေးအကြောင်း ရှိသူများအတွက်
သဘာဝ blueberry အနှစ်နဲ့ Australia နွားနို့ ပေါင်းစပ်ထားလို့ အာဟာရပြည့်ပြီး မျက်လုံးကျန်းမာရေးပါကောင်းစေတဲ့ Maxigense Chewable Milk
Tea Tree သွားတိုက်ဆေးဟာ fluoride ဓာတ်ပါဝင်မှုမရှိဘဲ သဘာဝအတိုင်းပြုလုပ်ထားသောကြောင့် သွား၊သွားဖုံး၊ ကြွေသွားများကို လည်းကျန်းမာစေပါတယ်။
၀က်ခြံ၊ လက်သည်း၊ ခြေသဲမျ့ား၌ဖြစ်သော မှိုရောဂါ၊သန်း၊ ဝဲခြောက်၊ပွေယားနာ၊ ခြေထောက် အနံ့အသက် မကောင်းသောသူများ အတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။
ပက်ပါမင့်ဆီ (peppermint oil) ဟာခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ လေထိုးလေအောင့်ဖြစ်သောသူများအတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
ရောဂါပျောက်ရန် အမွှေးနံ့သာဖြင့် လိမ်းသပ်နှိပ်နယ်ပေးသော အချိန်တွင် ခရမ်းရောင်နု ပန်းမွှေးပွင့် (Lavender oil) အဆီ
Aerogard Odourless Protection
မီးခိုးရောင်၊ ဖြူနေတဲ့ ဆံပင်ကို မူလအရောင်သို့ ရောက်အောင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နဂို​အတိုင်း ပြန်ဖြစ်လာစေသည်။
Eucalyptus အဆီဟာ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ဖျားနားခြင်း၊ တုပ်ကွေး၊ ကိုုယ်ခန္ဓာကိုက်ခဲသော သူများအတွက် ကောင်းပါတယ်။
Du'it Feet Skin Repair
ခြေ​ထောက်​ခြောက်​သွေ့​ခြင်း၊​ ကွဲ​အက်​ခြင်း၊​ ကြမ်း​တမ်း​ခြင်း​များ​ကို​ ငါး​ရက်​အ​တွင်း​ အ​ကျိုး​ရ​လဒ်​ကို​ ပိုင်​ဆိုင်​စေ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။​
Karicare Stage1 ( milk powder )
(ဝ - ၆)လကလေးငယ်များ သောက်သုံးနိုင်သည့် ဆိတ်နို့မှုန့်
Karicare Stage2( milk powder )
(၆~၁၂)လ ကလေးငယ်များ သောက်သုံးနိုင်သည့်ဆိတ်နို့ မှုန့်
Moroccan Smoothing Mask
Moroccanoil Smoothing Mask ကဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ဆံပင်နှစ်ခွဖြစ်ခြင်း၊ ဗာက်ထခြင်းနဲ့ ဦးရေဖြားယားယံခြင်းတို့ကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ ပေါင်းဆေးတစ်မျိူးဖြစ်ပါတယ်။
15000 Ks ~ 42000 Ks
13500 Ks ~ 37800 Ks
လိပ်ခေါင်းရှိသူများအတွက် သတင်းကောင်း။ အပြင်လိပ်ခေါင်းအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
SM-33 gel ထဲမှာပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းဆိုရင်သွားကိုက်ခြင်း၊ သွားဖုံးနာကျင်မှုကိုတိုက်ထုတ်ပေးခြင်း၊ဘတ်တီးရီးယားပိုးမွှားများကိုဖယ်ရှားပေးပြီးသွားနာကျင်မှုပြသာနာမှ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
pH levels ကိုထိန်းညှိပေးတာကြောင့် မိန်းအင်္ဂါယောင်ရမ်းခြင်းကို လျော့ကျစေ
Cashmere Perfume Happy Breeze
ရေမွှေးစွတ်စရာမလိုပဲ စွဲမတ်ဖွယ်မွှေးရနံလေးတွေနဲ့On The Body lotion
Cashmere Perfume Sweet Love
Swisse Magnesium(120 Tab & 200Tab)
Magnesium ဟာကြွက်သားများကို သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီး magnesium ဓာတ်နည်းပါးပါက ကြွက်တက်ခြင်း၊ အကြောဆွဲခြင်းတို့ဖြစ်စေပါသည်။
41000 Ks ~ 50000 Ks
36900 Ks ~ 45000 Ks
15000 Ks ~ 53000 Ks
13500 Ks ~ 47700 Ks
Healthy Care Garcinia Cambogin 10000
side-effect မရှိဘဲ ဝိတ်ကျ အဆီကျလိုသူများအတွက်
Healthy Care ငါးကြီးဆီ Omega 3-6-9
အသီးအရွက်အစားနည်းသော ကလေးငယ်များအတွက် Nature Way Kids Multi + Vegies
Nature’s Way Vita Gummies Omega-3 , DHA, Fish Oil , Trio
ကလေးငယ်များ ကျန်းမာစွာဖွံ့ဖြိုပြီး ဘက်စုံထူးချွန်ထက်မြက်စေသည့် Omega3Trio Fish Oil + High DHA
Nature’s Way Kids Omega3Fish Oil High DHA Trio
Omega3နဲ့ DHA ပေါင်းစပ်ထုတ်ထားတဲ့ အသီးသုံးမျိုးပေါင်းအရသာဖြင့် ဝါးစားနိုင်သည့် ငါးကြီးဆီ
23000 Ks ~ 55000 Ks
20700 Ks ~ 49500 Ks
5400 Ks ~ 6000 Ks
Nature's Way Protein - Chocolate
Protein ဓာတ်များပါဝင်တာကြောင့် ကြွက်သားများကို ပြန်လည် ကျစ်လစ်စေပြီး သန်မာစေပါတယ်။
Nature's Way Vita Gummies eye health
ဗောက်ထခြင်းနှင့် ဦးရေပြား ယားယံခြင်းတို့အတွက် အကောင်းဆုံး ခေါင်းလျှော်ရည်။
အမျိုးသားများသည် ပုံမှန်ကျန်းမာသော အနေအထိုင် အလေ့အကျင့်ဖြင့်
Moroccanoil မှ ဆံပင်ပါးသူများအတွက် Extra Volume shampoo
မျက်နာမှ အမဲစက်နဲ့ တင်းတိတ်များကိုလည်းလျော့ကျစေသည်
Swisse Odourless Fish Oil 400 nos
Moroccan oil ခေါင်းလိမ်းဆီ
48000 Ks ~ 74000 Ks
43200 Ks ~ 66600 Ks
Moroccan Hydration Conditioner
argan oil, Vitamin A and E နဲ့ရေညှိတို့ပါဝင်တာကြောင့် ဦးရေဖျားခြောက်သွေ့ခြင်း
49500 Ks ~ 69000 Ks
44550 Ks ~ 62100 Ks
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ဆံပင်ရှုပ်ခြင်းနှင့် ဆံကေသာကိုလည်းနူည့ံ့စေပါသည်
Natio Daily Defence Face Moisture SPF 50+
နေလောင်ဒဏ်ကိုကောင်းစွာကာကွယ်ပေးပြီးအသားအရည်အတွက်ကောင်းမွန်သည့် မျက်နှာလိမ်း cream
Ego Sunsense Aftersun Soothes Sun Damaged Skin Cooling Spray
All skin type စိတ်ချသုံးလို့ရတဲ့ ego sunscreen & spray လေးတွေပါ ✅
အသားအရေအတွင်းပိုင်းထိရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး သိသာစွာ အသားအရည်ကိုတင်းရင်း ကြည်လင်စေပါသည် ။
Eaoron- မျက်နှာကို ထူးခြားစွာ လှပသန့်စင်စေပါတယ်။
ချွဲသလိပ်များ ဖယ်ရှားပေးပြီး ကိုယ်ခံအားအတွက်ကိုပါအားဖြည့်ပေးတဲ့ - Sambucol Cold & Flu Kids ( Vitamin C + Zinc )
Swisse Skincare Clay Manuka Honey Mask
Swisse Skincare Mask တွေကမျက်နှာအသားအရေကိုထိန်းသိန်းရန်အတွက်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
25000 Ks ~ 27000 Ks
22500 Ks ~ 24300 Ks
ကလေးငယ်လေးအတွက် နှာပိတ်ပြီးအသက်ရှူ ခက်တာ ချောင်းဆိုးချွဲကြပ်လို့ အိပ်မရတာတွေ မခံစားရပဲကောင်းမွန်စွာအိပ်ပျော်စေဖို့ Vicks Baby Balsam
64000 Ks ~ 79000 Ks
57600 Ks ~ 71100 Ks
Collagen Drink အရည်
15000 Ks ~ 19500 Ks
13500 Ks ~ 17550 Ks
Eaoron SWF Brightening Capsules
အသားအရည်ကိုကြည်လင်ဖြူဖွေးစေသည့် Whitening Capsules
သွေးအားနည်းပြီး ဖွံဖြိုးမှုနှေးတဲ့ကလေးတွေအတွက် Nature's Way Iron+Vitamin C
Healthy Care Zinc chewable Milk Flavour Children's Health
Blackmores Teenage Multi For Girls
ဆယ်ကျော်သက်တွေ ကျောင်းသူတွေအတွက် နေ့စဉ်ခွန်အားတိုးပွားဖို့ Blackmores ရဲ့ teen multi+brain nutrients
Blackmores Teenage Multi For GUYS
ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအနိုင်ယူပြီး နေ့စဉ်ခွန်အား တိုးစေမည့် Blackmores teen multi
Cenovis Multivitamins and Minerals
အရိုး၊ အဆစ်၊ နှလုံး၊ မှတ်ဉာဏ်၊ အရေပြား၊ မျက်လုံး တွေအတွက် နေ့စဉ်ခွန်အားဖြည့်ပေးမည့် Multivitamin
အအေးမိခြင်းကို ကာကွယ်ပြီး နေ့တိုင်းလန်းဆန်းစေမည် သကြားမဲ့ Vitamin C
Darkness Looking Emboss Cotton Puff
ကိုးရီးယားနိုင်ငံထုတ် ဖောင်းကြွဝါဂွမ်း ဟာ 100% cosmetic cotton ဖြစ်လို့ အသေးမွှားလေးကစရှင်းလင်းပေးနိုင်သည်။
On The Body Wash and Shower
လုံလောက်တဲ့ အသီးအရွက် မစားဖြစ်တဲ့သူတွေနှင့် သွေးအားကောင်းဖို့တွက် အထူးဖော်စပ်ထားတဲ့ အားဆေး
QV naked roll-on(Blue & White)
ချွေးနံ့များနှင့် ဘက်တီးရီးယားများ ဆန့်ကျင်ပေးနိုင်တဲ့ Roll on ချိုင်းလိမ်းဆီ
16000 Ks ~ 18000 Ks
14400 Ks ~ 16200 Ks
အရေပြားရောင်ခြင်း၊ မိတ်ထခြင်း၊ အနာဖြစ်ခြင်းနှင့် နှင်းခူ ရောဂါများအတွက် အကောင်းဆုံး အနာရောဂါငြိမ်း Cream ဖြစ်ပါတယ်။
အရိုးအဆစ်ကြံ့ခိုင်ဖို့ Calcium နှင့်ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Swisse Hair Nutrition For Men & Women ဆံပင်သန်ဆေး
Nature's Way Kids Smart calcium
Baby လေးတွေအတွက် 100% safe ဖြစ်တဲ့ Organic QV moisturizing Cream
24000 Ks ~ 26400 Ks
21600 Ks ~ 23760 Ks
Magnesium, Folic acid နှင့် Siberian Genseng ပါဝင်လို့ အမျိုးသမီးတိုင်းတွက် နေ့စဉ်ခွန်အားကို တိုးပွားစေပြီး အလှအပတွက် အာဟာရကိုပေးသည်။
ဘက်စုံအဟာရပြည့်ပြီး ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါ မြှင့်တင်ပေးတဲ့ Nature's Way Kids Smart Multi + Dha
Life-Space Probiotic for Women with 11 Billion/cap
အမျိုးသမီးများရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးအထောက်အကူပြုပြီး ဆီးလမ်းကြောင်း၊ သားအိမ်ဆိုင်ရာများကို ကူညီပေးသည်။
ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်လို့ အသားအရေကို လှပဖြူစင်စေပြီး သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းစေကာ ဆံခြည်မျှင်သွေးကြောများ၏ ကျန်းမာခြင်းကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
အမျိုးသားများ၏ စိတ်ရောကိုယ်ပါ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အထူးမြှင့်တင်ပေးရန် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသည်။
ကိုယ်ခံအား ကောင်းတထက်ကောင်းစေဖို့ Zinc ဓာတ် အပြည့်အဝကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
အခုလိုရာသီမြိုးမှာ အရပွေားတှကေ ခွောကျကပျလို့ စိတျနှောကျရှကျဖွဈတာကို စိုပွေေြာ့ပွောငျးစပေါတယျ။
31700 Ks ~ 74000 Ks
28530 Ks ~ 66600 Ks
ဘေဘီလေးတွေ နှာစေးအအေးပါတ်ချောင်းဆိုးဖျားနာခြင်းတွေကို အကောင်းဆုံးကုသပေးမယ့် Sambucol Cold & Flu
တာရှည်ခံပစ္စည်းမပါဝင်တဲ့ မျက်စဉ်းခတ်ဆေးဟာ လူတိုင်းအသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Cetaphil Baby Massage Oil - Face & Body
ကလေးလေးတွေရဲ့ အရေပြားချွေးပေါက်လေးတွေဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ ညောင်းညာထိုင်းမှိုင်းတာတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက် Cetaphil Baby Massage Oil
Cetaphil Baby Shampoo - Hair
သဘာ၀ Chamomile ပနျးနှင့ျ အတူပွုလုပျ ထားတဲ့ ခေါငျးသဘာ၀ Chamomile ပန်းနှင့်သဘာ၀ Chamomile ပန်းနှင့်ထုခေါင်းလျှော်ရည်ဟာ မွေးကင်းစကလေးအတွက်အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
Cetaphil Baby Daily Lotion - Face & Body
Cetaphil Baby Daily Lotion မှာ Glycerin and Shea Butter ပါဝင်လို့ ကလေးငယ်များရဲ့အရေပြားကို အစိုဓါတ်ဖြည့်ပေးပြီး အရေပြားရောဂါများမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါသည်။
အသားအရေကြည့်လိုက်တော့ ခြောက်ကပ်ကပ်ကြီးဆိုပြီး စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွက်တော့ အထူးရှယ် စိုပြေလိုးရဲှင်း..
ကလေးများကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ကူညီပေးဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ် ဗီတာမင်ပေါင်း (၁၈) မျိုးဖြင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Blackmores Superkids Multi
Bellamy's Milk - No.(4)
(၃)နှစ်နှင့်အထက် ကလေးများအတွက် သဘာဝနွားနို့စစ်စစ်မှ ထုတ်လုပ်ပြီး အဓိကအာဟာရပေါင်း (၁၆)မျိုးပါဝင်တဲ့ ခွန်အားဖြည့် နို့မှုန့်
93500 Ks ~ 96500 Ks
84150 Ks ~ 86850 Ks
Upgrade Quality နဲ့ ရောက်လာတဲ့ Eaoron shining cream လေး ဟာ shining cream ဆိုတဲ့အတိုင်း လိမ်းလိုက်တာနဲ့ မျက်နှာလေး ကြည်ကြည်လင်းလင်းလေးဖြစ်စေပါတယ်
Glucerna for People with Diabetes
ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အာဟာရဖြည့် နို့မှုန့်
NuLax Extra strenght - Quick relief
ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို အမြန်ဆုံးသက်သာဖို့ သဘာ၀ အထူးစွမ်းပကားရှင် ဝမ်းနုတ်ဆေး
ကလေးငယ်များအတွက် တစ်မျိုးတည်းနဲ့ ခေါင်းလျှော်လို့လည်းရတဲ့ Gentle wash & shampoo
ကလေးများအတွက် Aloe Vera နှင့် Almond Oil ပါဝင်တဲ့ နူးညံတဲ့သဘာ၀ရေချိုးဆပ်ပြာရည်။
ခြောက်သွေ့ပြီး အထိခိုက်မခံ(နူးညံ့လွန်း)တဲ့ အရေပြားအတွက် သဘာဝစိုပြေမှုကို ပေးစွမ်းပါတယ်။
နှလုံး၊ ဦးနှောက်၊ မျက်စိနှင့် အဆစ်ရောင်နာများကို အထူးကူညီပေးပါတယ်။
သွေးအချိုဓာတ်များသူအတွက် insulin ကဲ့သို့ အကောင်းဆုံး သဘာ၀ ကြက်ဟင်းခါးသီးဆေး။
Cemoy - Toner
ဆေးဖက်ဝင်အပင် Botanical နှင့် Cosmetic ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့် ဗီတာမင် E / C တို့ပေါင်းစပ်ထုတ်ထားတဲ့ Toner
Japan ITO cleansing towel cotton tissues face wash 80 pcs
100% cotton, non-woven fabric ဖြစ်လို့ ပိုးမွှားကင်းစင်၊ လှပနုပျိုတဲ့ မျက်နှာလေးပိုင်ဆိုင်ဖို့ Facial Tissue နှင့် မျက်နှာသုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Fru gurt snacks yogurt jelly
စတော်ဘယ်ရီသီး၊ ပန်းသီး၊ ဘလိုးဘာရီသီးနှင့် မန်ဒရင် အရသာရှိခြင်း ဒန်ချဉ်ပုံစံဖြစ်လို့ စားလို့လည်းအရမ်းကောင်းပါတယ်။
Pentavite Multivitamin + Iron Kids Liquid(100ml & 200ml)
သံဓာတ်အပါအဝင် ဘက်စုံPenetavite Multivitamin မှာ Iron ဓာတ်ပါဝင်လို့ ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေပြီး ခွန်အားဖြည့်ပေးကာ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုပါ မြှ့င်တင်ပေးပါသည်။
27000 Ks ~ 39000 Ks
24300 Ks ~ 35100 Ks
Healthy Care Kids Chewable Vitamin C
ကလေးများ အရိုး၊ သွားများနဲ့ ကြွက်သားများ ကျန်းကျန်းမာမာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့ အထူးကူညီပေးပါသည်။
Fino Premium Touch Hair Mask ( Shiseido )
ဆံပင်ပျက်စီးခြင်း၊ ကျိုးခြင်းနှင့် ဆံသား အရောင်ဖြစ်ပေါ်မှုကို အမြန်ဆုံးပြုပြင် ကုသကာကွယ်ပေးမည့် Premium Touch
သင့် အရွယ်ကို ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်တစ်ယောက်ကဲ့သို့ လုံးဝ ပြောင်းလဲပေးမည့် အေရပြားအတွက် Glycation Reverse Capsules
နွား​နို့​စစ်​စစ်​မှ​ ပြု​လုပ်​ထား​ပြီး​ အ​ရိုး​နှင့်​ သွား​များ​အ​တွက်​ အ​ထူး​ထောက်​ပံ့​ပေး​ပါ​တယ်။​
Cetaphil Oily and Gentle Skin Cleanser(235/250ml&500ml)
အ​ရေ​ပြား​ဆ​ရ​ဝန်​တွေ​က​ အ​ကြုံ​ပြု​ထောက်​ခံ​​ခဲ့​ပြီး​​ အ​ရေ​ပြား​သန့်​စင်​ပေး​တဲ့​ Skin Cleanser နှစ်​မျိုး၊​
20500 Ks ~ 35000 Ks
18450 Ks ~ 31500 Ks
Selenium ပါ​ဝင်​တဲ့​ အ​မျိုး​သား​အား​တိုး​ဆေး​ တစ်​နေ့​တစ်​လုံး။​
20500 Ks ~ 36000 Ks
18450 Ks ~ 32400 Ks
Chantelle Radiance Source Skin Brightener Cream
အ​နည်း​ငယ်​အ​သုံး​ပြု​တာ​နဲ့​ မူ​ရင်း​အ​သား​အ​ရေ​ကို​ တောက်​ပ​စေ​ပြီး​ နု​ပျို​စေ​ပါ​တယ်။​
18500 Ks ~ 27500 Ks
16650 Ks ~ 24750 Ks
အတွင်းလိပ်ခေါင်း၊ အပြင်လိပ်ခေါင်းများကို အမြန်ဆုံး သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
Australian Pure Silver Ampoule - THERA LADY
သင့်ရဲ့ အရေပြားနုပျိုမှုနှင့် ပျော့ပျောင်းမှုတွေကို ပြန်လည်ခံစားရင်း ငွေရောင်လေးသန်းလိုက်ပါ
YPL Slim Magic Shorts
YPL SLIM PEACH SHORT
Swisse Collagen Glow with collagen peptides (60 Tab& 120Tab)
စားသမျှ၊ သောက်သမျှအစားအစာတွေကို Collagen အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလို့ အလှတရားကို ပိုင်ဆိုင်စေမည့် Collagen Glow.
35500 Ks ~ 57000 Ks
31950 Ks ~ 51300 Ks
Cetaphil SUN Kids Liposomal Lotion SPF 50+UVA/UAB
နူညံ့လွန်းတဲ့ (Sensitive Skin)အသားအရေအတွက် နေရောင်ကာ Very High Protection Lotion.
Nestle Milo 30% Less added Sugar (New)
နို့စစ်စစ်မှ ထုတ်လုပ်တဲ့ နေ့စဉ်ခွန်အားဖြည့် Milo
အသားအရေ အာဟာရဖြည့်ပြီး လန်းဆန်းနုပျိုစေမည့် alcohol မပါတဲ့ Cream
CEMOY 21 Day ILLUME SERUM ( Morning )
တစ်နေကုန် လှပဖို့ နံနက်ခင်းမှာ ကာကွယ်ပေးပြီး အချိန်မတန်မီ အိုမင်းခြင်း၊ အသားအရေရင့်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်ပေးနိုင်တဲ့ Morning Serum
Cemoy - Lotion
ဆေးဖက်ဝင်အပင် Botanical နှင့် Cosmetic ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့် ဗီတာမင် E / C တို့ပေါင်းစပ်ထုတ်ထားတဲ့ Lotion
တစ်နေကုန် မောဟိုက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ မျက်ကွင်းတဝိုက်ကို အေးမြလန်းဆန်းစေပြီး သက်တောင့်သက်သာ ရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Swisse ULTIBOOST Relax & Sleep Valerian Free
တင်းမာနေတဲ့ အာရုံကြောကို သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီး ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ အထူးကူညီပေးပါတယ်။
မိတ်ကပ်တွေ၊ ခရဲမ်တွေ၊ Mask တွေ လိမ်းဖို့ အိအိလေးဖြစ်ပါတယ်။
JMsolution Luminous Sun Spray
Healthy Care Kids High Strength
DHA Kid Healthy Care သည် ကလေးငယ်များ၏ ဦး နှောက်၊ အမြင်အာရုံနှင့်အာရုံကြောစနစ်အတွက် အထူးထုတ်ထားပါသည်။
Shishedo Tsubaki Premium Repair Mask
ပျက်စီးနေတဲ့ဆံသားကို ဦးရေပြားအတွင်းပိုင်းထိပြုပြင်ပေးပြီး ရှုပ်ပွနေတဲ့ဆံသားကို နူးညံ့ချောမွေ့သွားစေမယ့် Tsubaki Premium Repair Mask လေးကို Order တင်လို့ရပြီနော်
မျက်ကွင်းညိုခြင်း၊မျက်ဝန်းတစ်ဝှိုက် အရေးကြောင်းထခြင်း၊ မျက်အိတ်ဖောင်းခြင်း၊ ဆဲလ်သေတွေဖယ်ပေးမယ့် Cemoy Galaxy 4D Eye Cream
ရေချိုး/ ခေါင်းလျှော် နှစ်မျိုးစလုံးအသုံးပြုလို့ရပြီး ကလေးငယ်များ၏ နူးညံ့သောအသားအရေကိုခြောက်သွေ့ခြင်း မဖြစ်စေဘဲ အသားရေကို ပိုမို နူးညံ့စေသည်။
Rhinocort Hayfever & Allergy
နှာချေခြင်း၊ နှာပိတ်ခြင်း၊ နှာခေါင်းယားယံခြင်းနှင့် နှာရည်ယိုခြင်းတို့ကို အဓိကသက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။
Cemoy Revital Expert Defence
Cemoy Suncreen က အသားအရည်ကို ပါထိန်းသိမ်းပေးပြီး အရေးကြောင်းထခြင်း၊အမဲစက်မ တင်းတိပ်များဖြစ်ခြင်း၊ အသားအရေကွာခြင်းတို့အတွက် ကောင်းမွန်ပါသည်။
Nature's Way Kids Smart Immue Defence Chewables
ကလေးငယ်များ အအေးမိနှာစေးခြင်းကိုကာကွယ်ပေး၍ ကိုယ်ခံအားကောင်းစေပြီး အခြားရောဂါများကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
အရေပြား ခြောက်သွေ့မှုမှ ကာကွယ်တားဆီးရန် သဘာဝအစိုဓာတ်ကို ဖြည့်ပေးသည်။
မျက်ဝန်း၏နူးညံ့သောအသားအရေကိုချက်ချင်းရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီးမျက်ကွင်းညိုခြင်း ၊ မျက်ဝန်းတဝိုက်အသားအရေ ခြောက်သွေ့ခြင်းတို့အတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
အသားအရေနှင့်ပေါင်းစပ်အရေပြားများအတွက် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး အသားအရေအဆီပြန်ခြင်းကို အဓိကထားကာကွယ်ပေးပါသည်။
Eaoron Young Eyes Around The Clock(New)
မျက်ကွင်းညိုခြင်းနှင့် ကင်းဝေးပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်ဝန်းလေးပိုင်ဆိုင်ဖို့ Eaoron ရဲ့ Eye Cream
Cemoy Gift Set2cream
Limited edition Cemoy Gift Set ကိုမှ 5ml cream နဲ့ တွဲပေးထားတဲ့ set လေးပါ Set ထဲမှာ Toner 120ml, Lotion 120ml ပါတဲ့အပြင် Cemoy cream 10ml ဗူးလေးတွေလည်းအပိုပါလို့ တစ်ဗူးချင်းဝယ်တာထက်လည်းတန် cream မသုံးဘူးလို့ စမ်းသုံးချင်သူလေးတွေအတွက်လည်း ကွက်တိပဲနော်
Cetaphil Foaming Cleanser သည် အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်း ကို အရေပြားကိုခြောက်သွေ့သောခံစားချက်ကို မရရှိစေဘဲ မျက်နှာမှ အညစ်အကြေးများ ၊ ဖုန်မှုန့်များ ၊ အဆီများ မိတ်ကပ်များကို ညင်သာစွာ ဖယ်ရှားပေးသည်။
Eaoron က အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက် ရင်သားကို လှပအောင်ပြုလုပ်ပေးမယ့် Eaoron Breast Beautifier Serum
Eaoron Propolis Cream က အသားအရေအားလုံးအတွက်သင့်တော်ပြီး အထူးသဖြင့် ‌ခြောက်သွေ့သောအသားအရေနှင့် ခြောက်သွေ့သောအရေပြားအတွက်အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
Eaoron Propolis Eye Cream ဟာ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို လျော့နည်းအောင် ကာကွယ်ပေးပြီး မျက်အိတ်ဖောင်းခြင်း၊ မျက်ကွင်းညိုခြင်း၊ မျက်လုံးတဝိုက် အရေးကြောင်းထခြင်း များကိုသက်သာစေပါတယ်။
Eaoron Multi Contouring Collection
Eaoron Blender လေးဟာ မိတ်ကပ်လိမ်းရာတွင် မိတ်ကပ်တွေကို အလေအလွင့်မရှိစေဘဲ နူးညံ့ ညင်သာတဲ့ အထိအတွေ့ကို ရရှိစေမှာပါ။
ကနွြးမာသောကှီးထှားမှုနှင့ဖြှံ့ဖှိုးမှုရရှိစခှငြေး၊ အမှငအြာရုံကောငြးမှနစြခှငြေး၊ အာရုံကှောလုပဆြောငမြှု ကောငြးမှနစြခှငြေး ၊ အရိုး၊ အရပှေား၊ သှားဖုံး၊ သှားအပှငြ အထှထှကေကွေလေးငယျတိုငျး ကနြျးမာစှာဖှံဖွိုးကွီးထှားပွီး အစာအိမျအူလမျးကွောငျးကနြျးမာပွီး အကလေးငယတြို
Pain Away Relief Cream
Dencorub Penetrating Arthritis Cream
Dencorub Arthritis Cream သည် ကြွက်သားများနာကျင်ခြင်းနှင့်နာကျင်မှုများကို ယာယီသက်သာစေရန်ကူညီပေးပါသည်။
Cemoy Facial Treatment Cleanser
Cemoy ရဲ့ The Facial Treatment Cleanser လေးက vitamin တွေကြွယ်ဝစွာပါတဲ့ cream cleanser type ဖြစ်ပြီး marine extract တွေပါဝင်လို့ skin tone ကြည် လင်စေပြီး Glow ဖြစ်စေပါတယ်။
Japan ITO Tissue Face Use
Japan ITO Tissue ဟာ အရည်အသွေးမြင့်သော သဘာဝဟင်းသီးဟင်းရွက် အမျှင်ဖြင့် ပြုလုပ် ထားသောကြောင့် အသားအရေကိုချောမွေ့ နူးညံ့သောအထိအတွေ့ ခံစားချက်ကိုရရှိစေပါတယ်။
Healthy Care Kids Immue Chewable
ကလေးများ၏ကိုယ်ခံစွမ်းအား ၊ ခုခံနိုင်စွမ်းကိုအထောက်အကူပြုရန်နှင့် ကိုယ်ခံအားကိုမြှင့်တင်ရန် ဗီတာမင်စီ၊D ၊ E၊ Zinc နှင့် betacarotene တို့ဖြင့်အထူးဖော်စပ်ထားသည်။
Restoria Colour Restoring Shampoo 147 ml
Cenovis Women's Multivitamin
အမျိုးသမီးများရဲ့ ခန္တာကိုယ်ကျန်းမာရေးအ တွက်လိုအပ်တဲ့ vitamin များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်
23100 Ks ~ 35000 Ks
20790 Ks ~ 31500 Ks
Cenovis Women's Multi Energy boost
အမွိုးသမီးမွားအ တှကလြိုအပတြဲ့ vitamin မွားကို2ဆ ဖှည့ဆြညြးပေး